Xumbo toogte 🥇 Gali oo ku raaxee emulator.online
Shooter xumbo waa ciyaar loogu talagalay Android iyo iOS oo u baahan fikir deg deg ah iyo hadaf sax ah. Ciyaartu waxay leedahay muuqaal midabbo badan leh iyo ciyaar aad u fudud. Hubi tilmaamaheena oo baro inaad ciyaartid ciyaartan balwada leh.
Sida loo ciyaaro Xumbo toogte 🙂
Si aad ugu ciyaarto khadka xumbo khadka tooska ah bilaash, waa inaad sameysaa raac tilmaamahan talaabo talaabo ah:
Tallaabada 2. Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u gasho websaydhka, ciyaarta ayaa mar hore lagu soo bandhigi doonaa shaashadda. Kaliya waa inaad garaac ciyaarta oo waxaad bilaabi kartaa xulashada qaabeynta aad ugu jeceshahay. Mar alla markii aad guuleysato ciyaar waad isleegi kartaa. Waxaa jira wadar ahaan heerarka 5.
Tallaabada 4. Hel in la baabi'iyo dhammaan goobooyin ee ciyaarta.
Muxuu yahay Roobku Xumbo? 🤓
Xumbo toogte waa mid ka mid ah ciyaaraha is-dhexgalka toogashada xumbada ugu caansan ee la yaqaan, sababtoo ah sahlanaanta ciyaarta iyo inuu yahay mid dareen leh. Waxaad dhihi kartaa taas Waa isku dar ah laba kulan oo kale oo caan ah sida "tetris" iyo "ku xir afar", taas oo ka dhigaysa Xumbada Shooter ciyaar aad u xiiso badan.
Ujeeddada Xumbo toogte waa mid aad u fudud: ururi dhibco badan intii suurtagal ah burburinaya goobooyin midab leh. Si loo burburiyo goobooyinka, waxaa lagama maarmaan ah in la isku xiro ugu yaraan saddex goobo oo isku midab ah.
Taariikhda xumbo Shooter 🙂
Waa madadaalo iyo caan ciyaarta xujo taas oo aan wada ciyaarnay waqti. Si kastaba ha noqotee, inbadan ma oga in xididdadiisa ay ku jiraan ciyaar ka soo baxday gudaha maraakiibta japaniska 80-yadii, oo asal ahaan waxaa loogu yeeri jiray Xumbada Xumbada. Ma aysan aheyn ilaa 90-meeyadii inay gaarto Galbeedka, laakiin xoogaa isbedel ah ayaa laga keenay ciyaarta asalka ah.
Bubble Bobble Waxaa la sii daayay sanadkii 1986-kii markabkii Japan. Dhexdeeda, laba masduulayaal oo yar, Bub iyo Bob, ayaa wajahay a quudhin, oo leh xubno ka mid ah xujooyinka iyo dagaalada ka dhanka ah cadawga mawduuc heer kasta ah.
Iyada oo graphic ah sida ay waqtiga, iyo xusuusin ah kartoonada Japan, ka juego suuqa ka istaagay ahaansho madadaalo iyo qabatin, wax muhiim u ah arcade. Intaas waxaa sii dheer, waxay ahayd mid ka mid ah ciyaarihii ugu horreeyay ee la isticmaalo fikradda "dhammaad badan", wax uun caan ka noqon lahaa ciyaaraha casriga ah. Waxay kuxirantahay waxqabadka ciyaaryahanka, dhamaadka xiisaha wuu ka duwanaan karaa
Sidii markii horeba, ciyaarta ayaa kaliya ku guuleysatay Japan, in 1994, shirkadda wax soo saarka ee Taito waxay go'aansatay inay badbaadiso astaamaheeda caanka ah oo ay ku sii deyso cinwaan cusub. Markan ayaa loo yeedhay Xujada xujada, iyo makaanikooyin xujo nadiif ah. Ciyaarta ayaa aheyd mid deg deg ah.
Noocan cusub, waxay ku guuleysteen inay sameeyaan wax ka duwan wixii ay ku barteen. Waxay dhinac iska dhigaan barxadaha cadawga si ay nooga dhigaan inaan galno ciyaarta xujo ee gogo 'isu eg ee midab isku mid ah si ay u dhibco. Laakiin, si ka duwan Tetris, jug kale oo waqtigaas dhacday, gogo 'ayaa ka soo baxay xagga hoose ilaa kor, waxaa sii daayay Bub iyo Bob.
Haddii aad shaashadda ka buuxiso qaybo waxaad heli doontaa Game Over. Qeybaha la tuuray, oo ahaa goobooyin biyo ah, waxay ahaayeen sharwadayaal ciyaarta caadiga ah ee tixraaca.
Laba ciyaartoy si wada jir ah ayey uga qeybqaadan karaan isla markaana dhibco kuwada wadaagi lahaayeen. Fikradda ayaa ahayd in lagu soo bandhigo jilayaasha tobankii sano ee la soo dhaafay jiil cusub oo ciyaartoy ah, laakiin markan waji cusub leh. Wayna shaqeysay.
Noocyada Xumbo-toogte ⭐
Waxaa jira in ka badan 30 nooc oo ah cayaartan caanka ah, laakiin kuwa ugu khuseeya ee loo sameeyay fiidiyowyada fiidiyowga waxay noqon doonaan:
Ultra Bust-A-Dhaqaaq iyo xujo Bobble Live loogu talagalay qalabka Console.
Bust-A-Dhaqaaq Deluxe loogu talagalay PSP.
Xujo puble 3D loogu talagalay Nintendo (3DS).
Xujo Bobble Online si gaar ah loogu talagalay PC.
Xujo Xubbo Disney (macruufka)
Xumbo toogte, bilaash ah
Dhammaan kuwa la sheegay, shaki la'aan, midka ugu guulaha badan ee Bust-A-Move waa Shooter Shooter
Xumbo toogte ayaa leh a muuqaal fudud iyadoo si toos ah loo soo jeedinayo. Markan ciyaartu sidaa ugama welwelin gelinta waxyaabaha caadiga ah ee taxanaha ah ee loogu waxyooday, laakiin halkii, iyadoo la ilaalinayo gameplay qabatimo taas ayaa ka dhigtay mid caan ah.
Cayaartu waxay sii wadaysaa qorshaha lagu tuurayo dhinacyada fallaarta, si loo waafajiyo midabbada, iyo astaamaha dhibcaha. Farqiga ugu weyni waa taas Xumbo-toogte waxaa lagu bixiyaa bilaash daalacashada ama barnaamijyada moobiilka, halka asalkiisana loogu talagalay qalabka ciyaarta ama PC.
Xeerarka Xumanka Xumbo 😍
Kaaga ugu muhiimsan Ujeedada in Xumbo toogte waa ka qaad dhammaan kubadaha midabada leh shaashadda laga soo ridayo kubbado midabbo leh oo madfac wata.
Xusuusnow waa inaad u dhigma ugu yaraan saddex kubadood oo isku midab ah si markaa kuwan oo dhami u qarxaan, oo sidaasna shaashadda ku dhammaadaan iyadoo kubbadaha oo dhan la tirtiray. Midabada kubbadaha ka soo baxaya foostada waa kala sooc, sidaa darteed ma fududa sida la moodo.
Si tan loo sameeyo, waa inaad ku taabataa shaashadda jihada aad rabto inaad ku toogato madfaca iyadoo la tixgelinayo midabka kubbadda loo ridayo si loo helo wax u dhigma.
Intaa waxaa dheer haysashada kuweenna xirfad Markaad dooranaysid meesha aad dhigaysid kubbadaha, sidoo kale aad ayey muhiim u tahay in la haysto hadaf fiican. Ujeeddada khaldan ama jihada qaldan waxay u horseedi kartaa natiijo dhimasho ah.
Waa inaad taxaddartaa maxaa yeelay haddii safafka kubadaha midabada leh ay gaaraan waadiga, waad lumisay ciyaarta waana inaad dib u bilowdaa.
Haddii ay kuu harsan yihiin kubbado yar si aad ciyaarta u dhammeysato, ama midabada kubbadda ee ka soo baxda foostada kaa caawin mayso inaad baabi'iso kubbadaha, waanu ku tusi doonaa tan khiyaamo.
Dhig kubadaha midabada leh inaadan xiiseyneynin hal (ama mid) midab isku mid ah oo aad horey ugu laheyd shaashadda, tusaale ahaan on laba kubadood ubax Kubadahaani kuwa ugu horeeya wuxuu u dhaqmi doonaa sidii saldhig ka mid ah kuwan soo socda, iyo marka aad midabkaas hesho waxaad u baahan tahay jabiya aasaaskaas, dhamaan kubadaha dusheeda kuyaala iyana way baaba’ayaan
Marka waxaad ciyaarta ku guuleysan kartaa guul oo waxaad ka horjoogsan kartaa kubbadaha inay gaaraan madfaca kugu keenaya inaad lumiso.